Indray alina 385
Eo ambanin'ny pad
pataloha vehivavy tonga fotoana
Ahoana ny fisafidianana ny haben'ny diaper ho an'ny olon-dehibe
Tahaka ny amin'ny akanjo rehetra, ny fahafantarana ny fomba hifidianana ny haben'ny diaper ho an'ny olon-dehibe dia tena ilaina mba hiantohana ny fampiononana sy ny fahombiazany. Te-hahazo antoka izahay fa azonao ny fampahalalana ilainao, ka ity ny famintinana ny zavatra hodinihina ato amin'ity torolàlana ity. Zava-dehibe azo alaina: Diaper ho an'ny olon-dehibe dia natao hitondra fampiononana ...
Fomba tsara indrindra hifidianana atin'akanjo fiarovana ho an'ny vehivavy
Vehivavy maro no mahatsapa ny tsy firaharahiana, indrindra rehefa mihantitra. Mijanòna amin'ny fitantanana ny vatanao miaraka amin'ny diaper misintona ho an'ny vehivavy ho an'ny olon-dehibe, natao ho an'ny fahamendrehana, fahamainana ary tsy misy fofona. Ny fitadiavana ny vokatra incontinence mety dia midika fa tsy manahy intsony amin'ny fivoahana, na mila fiarovana maivana antoandro ianao...
Fahasamihafana eo amin'ny Diapers ho an'ny olon-dehibe amin'ny fomba kasety sy amin'ny diapers ho an'ny olon-dehibe
Famintinana: Zava-dehibe ny fisafidianana ny diaper ho an'ny olon-dehibe mety amin'ny fitakiana samihafa. Eritrereto ny lafin-javatra manan-danja rehetra mba hahazoana antoka fa mividy diaper mety tsara ianao izay tsy mitete. Olana goavana nefa azo fehezina. Menatra mihitsy ny anti-panahy miresaka momba izany. Na izany aza, i...
Ahoana ny fomba hifidianana ny fandriana fanariana tsara indrindra ho an'ny zazakely?
Amin'ny ankapobeny, diaper no ampiasaina ho an'ny zazakely, fa indraindray ny ankizy dia mbola mando akanjo sy kidoro. Amin'izao fotoana izao, ny underpads azo ampiasaina dia azo ampiasaina. Izy io dia afaka manasaraka ny urine ary mitazona ny fandriana ho maina sy madio. Inona àry no fitaovana tsara ho an'ny underpad? Ahoana no mifidy ny underpad? Inona no Materi...
Fisintonana olon-dehibe vs. Diapers: Inona no mahasamihafa azy?
Fisintonana olon-dehibe vs. Diapers nohazavaina ao anaty fehintsoratra iray. Na dia mety hampisafotofoto aza ny fisafidianana eo amin'ny fisintonana olon-dehibe vs. diapers, dia miaro amin'ny tsy firaharahiana izy ireo. Ny pull-up amin'ny ankapobeny dia tsy dia matevina loatra ary toy ny atin'akanjo mahazatra. Diapers anefa dia tsara kokoa ny misoroka ary mora ovaina, misaotra t...
Fararano ao amin'ny orinasantsika @2021 Oct.
Amin'ny maha-shina mpanamboatra sy varotra combo ary manam-pahaizana manokana amin'ny vokatra ara-pahasalamana mihoatra ny 25 taona miaraka amin'ny CE&ISO.Tianjin Jieya Women's Hygiene Products CO.,ltd mafana mandray ny fitsidihanao. Manana traikefa maherin'ny 7 taona izahay ary traikefa fonosana marika OEM. Ny tena vokatray dia diape adult...
Inona no atao hoe Underpad azo ampiasaina?
Inona no atao hoe Underpad azo ampiasaina? Ny underpads azo ampiasaina (underpad azo ampiasaina) dia azo alaina miaraka amin'ny lamosina PE tsy mitovy (maitso na manga ny ankamaroany). Izy ireo dia noforonina amin'ny fampiasana fitaovana mitovy amin'ny seza fanariana hafa na lambam-pandriana. Ny underpads azo ampiasaina amin'ny ankapobeny dia hita ao anaty ab...
Ahoana ny fisafidianana ny pads fanofanana Puppy Potty
Ny puppies dia amboara fifaliana sy hery. Mitondra fahasambarana ho an'ny tokantranonao sy ny fiainanao izy ireo. Manao korontana koa anefa izy ireo. Amin'ny maha-tompon'alika anao dia anjaranao ny manampy ny puppy vaovao hianatra ny toerana hampiasana ny vilany, ary midika izany fa mampiasa pad fanofanana puppy potty. Mazava ho azy, raha jerena ny isan'ny habe...
Misafidiana ny Pad Sanitaire tsara
Rehefa tonga ny fadimbolanao dia mila antoka ianao fa ny pad fidiovana dia manome fiarovana azo antoka tsy misy leakage. Rehefa dinihina tokoa, inona no mety mahamenatra noho ny fisian'ny tasy eo amin'ny zipo? Ny fampiononana no zava-dehibe indrindra, ataovy azo antoka fa mahazo aina ny pad anao ary tsy mahatonga anao...
Mandray ny baikon'ny OEM izahay, ary mitady mpiasa eran'izao tontolo izao hizara ny marika amin'ny tsena manerantany, ary mazava ho azy fa hanome fanohanana ara-barotra izahay.
Adiresy: No.6 Baofu Road, Tianbao Industrial Area, Baodi District, Tianjin, China
Fomba tsara indrindra hisafidianana ny fiarovana ny vehivavy...
Ny fahasamihafana eo amin'ny Diape ho an'ny olon-dehibe amin'ny fomba kasety...
Ahoana ny fisafidianana ny fandriana fanariana tsara indrindra...
Fisintonana olon-dehibe vs. Diapers: Inona no ...
Sanitary Pad 245mm, Female Sanitaire Pad, Lady Pads, Fampiasana alina 415mm, Napkin fidiovana Ion ratsy, Towel fidiovana vehivavy malefaka,